जागरण – Online Jagaran
सुर्खेतका पालिका प्रमुखहरुले लिए सपथ, सुशासन र सेवा प्रवाह प्राथमिकतमा
८ जेष्ठ २०७९, आईतवार २०:०८ May 22, 2022 जागरण
जागरण संवाददाता सुर्खेत, ८ जेठ । सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आज पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित पालिका प्रमुखहरुलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यले आइतबार सपथ खुवाउनुभएको हो । पाँच नगरपालिका मध्य वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मोहनमाया भण्डारी ढकाल, लेकवेशी नगरपालिकामा उमेशकुमार पौडेल, भेरीगंगा नगरपालिकामा […]
पालिका निर्वाचनमा कुन दलको स्थान कती ?
८ जेष्ठ २०७९, आईतवार १४:१३ May 22, 2022 जागरण
काठमाण्डौं, ८ जेठ (जागरण) । पालिका निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत अहिलेसम्म ६ सय ९६ वटा पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवरण अनुसार २ सय ४८ नगरपालिका र ४ सय ४८ गाउँपालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको हो । जस अन्तरगत सबैभन्दा धेरै नेपाली काँग्रेसले ३ सय १० स्थानीय तह जितेर पहिलो स्थानमा छ […]
हुम्लामा जहाजको टिकट पनि पाउँदैनन् नागरिक
८ जेष्ठ २०७९, आईतवार १३:५७ May 22, 2022 जागरण
हुम्ला ८ जेठ (जागरण) । राष्ट्रिय सडक सञ्जालले नछोएको हुम्लाका नागरिक काम विशेषले शहर जानुपर्दा निकै समस्या भोग्ने गरेका छन् । हवाइ मार्गबाट मात्र यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका उनीहरुले सदरमुकाम सिमकोटबाट सुर्खेत, नेपालगञ्ज वा काठमाडौं जान सहजै जहाज पाउँदैनन् । हरेक दिनजसो जहाजको टिकट लिन सदरमुकाम सिमकोटस्थित विमानस्थल पुग्ने धेरै सर्वसाधारण खाली हात घर फर्किनुपरेको […]
कर्णालीका सबै पालिकाको नतिजा सार्बजनिक
७ जेष्ठ २०७९, शनिबार १३:३६ May 21, 2022 जागरण
सुर्खेत, ७ जेठ (जागरण) । नेकपा एमालेले कर्णालीमा सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेको छ । २०७४ सालमा पहिलो दल बनेको एमाले अहिले तेस्रो नम्बरमा खुम्चिएको छ । कर्णालीका ७९ वटै पालिकाको मत परिणाम नतिजा सार्बजनिक हुँदा सबैभन्दा लाभ कांग्रेसलाई भएको छ । कांग्रेसले ३३ वटा पालिकामा जित हासिल गरेको छ । दोश्रो स्थानमा रहेको माओवादीले २३ […]
७ जेष्ठ २०७९, शनिबार १३:२५ May 21, 2022 जागरण
काठमाण्डौ, ७ जेठ (जागरण) । अहिलेसम्म ६ सय ९० वटा पालिकाको नतिजा आएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार २ सय ४३ नगरपालिका र ४ सय ४७ गाउँपालिका गरी ६ सय ९० पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको हो । नेपाली कांग्रेसले मेयर १ सय २१ र अध्यक्षमा १ सय ८४ गरी ३ सय ५ पालिकामा प्रमुख […]
कर्णालीमा काँग्रेस पहिलो
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १३:३३ May 20, 2022 जागरण
देशभर नै विभाजनको असर खेपिरहेको नेकपा एमालेले कर्णालीमा सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेको छ । २०७४ सालमा पहिलो दल बनेको एमाले अहिले तेस्रो नम्बरमा खुम्चिएको छ । ७९ मध्ये ७६ पालिकाको मत परिणाम आइसक्दा सबैभन्दा लाभ कांग्रेसलाई भएको छ । कांग्रेसले ३२ वटामा जित हासिल गरेको छ । माओवादीले २१ वटामा र एमालेले १५ मा जितेको […]
कर्णाली प्रदेशसभा बैठक बोलाइयो
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १३:२९ May 20, 2022 जागरण
सुर्खेत, ६ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेशसभाको १० औँ अधिवेशन यही जेठ १० गते दिउँसो २ बजे बोलाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नेपालको संविधानको धारा १८३ ९१० बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले जेठ १० गते प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वानका लागि […]
दैलेखका सबै स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम सार्बजनिक
४ जेष्ठ २०७९, बुधबार १८:१८ May 18, 2022 जागरण
दैलेखका सबै स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम सार्बजनिक भएको छ । प्राप्त मत परिणाअनुसार पाँच वटा पालिकामा काँग्रेस विजयी भएको छ भने ४ वटा पालिकामा एमाले विजयी भएको छ । यस्तै, दुईवटा पालिकामा भने नेकपा माओवादी केन्द्रले जित हात पारेको छ । जस अन्तरगत नारायण नगरपालीका नगर प्रमुखमा एमालेका लोमन शर्मा । नगर उपप्रमुखमा एमालेकै तप्ता […]
कर्णालीका ६५ पालिकाकाको नतिजा सार्बजनिक, २९ पालिका जित्दै काँग्रेस पहिलो स्थानमा
४ जेष्ठ २०७९, बुधबार १४:४७ May 18, 2022 जागरण
सुर्खेत, ४ जेठ (जागरण) । कर्णालीका ७९ वटा पालिका मध्य ६५ पालिकाको मतपरिणाम सार्बजनिक भएको छ । प्राप्त मत परिणाम अनुसार २९ पालिका जित्दै नेपाली काँग्रेस अग्रह स्थानमा छ भने १९ पालिका जितेर माओवादी दोश्रो स्थानमा रहेको छ । २०७४ को स्थानीय तहमा २७ पालिका जितेको नेकपा एमाले भने १० पालिकामा खुम्चिएको छ । एकिकृत […]